बुढीगंगा गाँउपालिकामा स्थानीय र प्रहरी झडप, दुई राउण्ड हवाई फायर « News24 : Premium News Channel
बुढीगंगा गाँउपालिकामा स्थानीय र प्रहरी झडप, दुई राउण्ड हवाई फायर
विराटनगर, १६ साउन । मोरङको बुढीगंगा गाँउपालिकामा लागूऔषध कारोबार भईरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा पुगेको प्रहरीलाई आक्रमण गर्ने ५ जना कारोबारीलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
बिहीबार राति करिब ९ बजे बुढीगंगा गाँउपालिका वडा नं. १ करैया वस्तिमा सादा पोशाकमा गएका प्रहरीलाई करिब १ सय ५० जना स्थानीयले आक्रमण गरेका थिए । स्थानीयले आक्रमण थालेपछि प्रहरीले दुई राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो ।
सो घटनामा तीन जना प्रहरी घाइते भएका छन् । उनीहरु मध्ये दुई जना सामान्य उपचार पछि घर फर्केको र एक जनाको बुढीगंगा गाँउपालिका स्थित विराट मेडिकल कलेजमा उपचार भइहेरकोे मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रहरी आउने थाहा पाएर गाँउलेहरु अगाडी देखिनै तयारी अवस्थामा रहेकोले प्रहरी माथि आक्रमण भएको जानकारी दिनु भयो ।
लागूऔषध कारोबारीमा संलग्न पक्राउ पर्नेहरुमा बुढीगंगा गाँउपालिका वडा नं. १ का बलराम ऋषिदेव, विरेन ऋषिदेव, चन्देश्वर ऋषिदेव, देवनारायण ऋषिदेव र महादेव ऋषिदेव रहेका छन् । उनीहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही गरिने उपरिक्षक खड्काले जानकारी दिनु भयो ।
लागूऔषध गाँजा र कोरेक्स खोज्न प्रहरीको अर्को टोली खटाएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी पुग्नु अघिनै उनिहरुले लागूऔषध लुकाई सकेको हुनाले बरामद गर्न नसिकएको उपरिक्षक खड्काले जानकारी दिनु भयो ।